မလေးရှားအလံနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေဝတ်လို့ လူ၉ယောက် Jail ထဲအောင်းလိုက်ရ | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / knowledge / မလေးရှားအလံနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေဝတ်လို့ လူ၉ယောက် Jail ထဲအောင်းလိုက်ရ
မလေးရှားအလံနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေဝတ်လို့ လူ၉ယောက် Jail ထဲအောင်းလိုက်ရ
Staff Writer 17:47 featured , knowledge Edit
သြစတြေးလျလူမျိုး အမျိုးသား ၉ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က မလေးရှား ဖော်မြူလာဝမ်း ဂရင်းပရီပြိုင်ပွဲမှာ မလေးရှားနိုင်ငံအလံပုံစံ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေကို ဝတ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသက် ၂၅နှစ်ကနေ ၂၉နှစ်အကြားရှိတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ လူထုရဲ့ နိုင်ငံတော်အလံရဲ့ သိက္ခာကိုချမှု၊ မရိုသေမှုတွေနဲ့ ရဲတွေရဲ့ ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
“သူတို့ဟာ အရက်သေစာသောက်စားထားကြပါတယ်” လို့ ရဲအရာရှိ Abdul Aziz ကဆိုပါတယ်။ “ဒီအတွင်းခံတွေကို ဝယ်ယူခဲ့တဲ့နေရာကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်” လို့ ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။
ဒီပုံရိပ်တွေဟာ Instagram ဗီဒီယိုတစ်ခုကနေ ပေါက်ကြားလာခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်း အရှေ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ Kinabalu တောင်ပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ ပုံတွေကို တင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း တိုးရစ်စ်လေးဦးကို အကျဉ်းချဖူးပါတယ်။
သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတနှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Michelle5October 2016 at 17:16
To Whom may concern, I couldn't contact the responsible person for my freelance fees for News on ThitHtooLwin. Can someone takeaproper action for that please? Thank You very much.